क्षयरोग / टीबी (Tuberculosis) - निरोगी नेपाल मा स्वागत छ निरोगी नेपाल मा स्वागत छ
क्षयरोग (टीबी, TB) माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस (Mycobacterium tuberculosis) नामक ब्याक्टेरियाबाट हुने एक प्रकारको सरुवा रोग हो । यो शरीरका कुनै पनि भागमा हुन सक्ने भए पनि फोक्सोमा हुने सम्भावना बढी हुन्छ । फोक्सोमा हुने क्षयरोगलाई पल्मोनरी टीबी (Pulmonary TB) अर्थात् फोक्सोको क्षयरोग भनिन्छ । क्षयरोग हुने अन्य अंगहरुमा हाड, लिम्फ ग्रन्थी, मिर्गौला, पाठेघर, मस्तिष्क (मेनिन्जीस्), छाला इत्यादि हुन् ।
क्षयरोगीले खोक्दा वा छिम्दा निस्केका पानीका मसिना छिटाहरु सास सँगै भित्र छिरे भने यो एक क्षयरोगी बाट अर्को स्वस्थ मानिसमा सर्दछ । बढी भीड भएको ठाउँमा वा बढ्ता आद्र्ता भएको ठाउँमा यो सर्ने सम्भावना बढ्ता हुन्छ । यस रोगका ब्याक्टेरियाहरु फोक्सो मा प्रवेश गरेपछि सो व्यक्तिमा क्षयरोग का प्रारम्भिक लक्षणहरु देखा पर्दछन् जसलाई प्राथमिक क्षयरोग भनिन्छ । तर यसले कुनै उल्लेखनीय प्रभाव पार्दैन । किनकि शरीरको प्रतिरोध शक्तिका कारण ती ब्याक्टेरियाहरुलाई कुनै निश्चित ठाउँमा सीमित गर्ने काम हुन्छ, जसलाई घोन्स फोकस (Ghon’s focus) भनिन्छ, जहाँ ती ब्याक्टेरियाहरु लामो समयसम्म सुषुप्त अवस्थामा रहन्छन् । पछि शरीरको प्रतिरोध शक्ति कमजोर भएका बेला ती ब्याक्टेरियाहरुले पुनः शरीरमाथी दुष्प्रभाव देखाउने सम्भावना हुन्छ, त्यसलाई द्वितीय चरणको (secondary) क्षयरोग भनिन्छ जुन धेरैजसो वयस्क मानिस मा देखिन्छ । विकासोन्मुख मुलुक मा रहेको ठूलो जनसंख्या क्षयरोग का किटाणुको सम्पर्कमा आइसकेका हुने हुँदा तिनमा क्षयरोगका ब्याक्टेरियाहरु निष्क्रिय रूप मा बसिरहेका हुन्छन् र शरीर को कमजोरी बढ्नासाथ सक्रिय बनेर क्षयरोग को द्वितीय चरण का अर्थात् पुनर्सक्रिय चरण का लक्षणहरु देखा पर्दछन् । विकसित मुलुक मा भने यो रोग विरलै भेटिन्थ्यो तर एचआईभी एड्स को प्रसारण पछि यसका रोगी को संख्या पनि बढ्न थालेको छ ।
क्षयरोग को प्राकृतिक क्रम :
क्षयरोग का दुई अवस्था छन्–
१. निष्क्रिय (गुप्त) क्षयरोग : एकचोटि क्षयरोग का जीवाणुाबाट संक्रमित भए पछि कहिल्यै पनि ती बाट मुक्ति मिल्दैन । ती जीवाणुहरु कुनै पनि प्रभाव नपारीकन, लक्षण नदेखाईकन फोक्सो को कुनै निश्चित स्थान मा निष्क्रिय रूप ले रहिरहन्छन् । त्यसलाई ल्याटेन्ट टीबी अर्थात् गुप्त क्षयरोग भनिन्छ । जब शरीर को रोग प्रतिरोध क्षमता शक्ति घट्छ तब यी सक्रिय हुने खतरा बढ्छ । त्यसैले लक्षण नदेखिए पनि भविष्य मा हुन सक्ने खतरा लाई ध्यान मा राखेर यस किसिम को गुप्त क्षयरोग को पनि जाँच गरेर उपचार गर्नु आवश्यक हुन्छ । छ महिना सम्म आइजोनायजिड (Isoniazid) द्वारा यसको उपचार गरिन्छ । यो अवस्था मा क्षयरोग ले सरुवा स्वभाव देखाउँदैन ।
२. सक्रिय क्षयरोग : जब क्षयरोग का संकेत र लक्षणहरु देखिन थाल्छन् त्यसलाई सक्रिय क्षयरोग भनिन्छ । यो कहिलेकाहीं निष्क्रिय अवस्था मा जानुभन्दा अगावै क्षयरोग का जीवाणु सँग संपर्क मा आउनासाथ देखिन सक्छ भने कहिलेकाहीं क्षयरोग का जीवाणु सँग संपर्क मा आएको वर्षौं पछि मात्र देखिन सक्छ । यो अवस्था मा क्षयरोग ले सरुवा स्वभाव देखाउँछ ।
सक्रिय क्षयरोग का लक्षणहरु :
क्षयरोग भएका मानिसहरु मा निम्न प्रकार का लक्षणहरु देखिन्छन्–
दुई हप्ताभन्दा लामो समयसम्म खोकी लागिराख्नु
खकार मा रगत देखिनु
साँझपख सामान्य ज्वरो
रात को समय मा धेरै पसिना आउनु
छाती को दुखाई महसूस हुनु
तौलमा गिरावट आउनु
अरुची तथा वेचैनी सँगै सामान्य कमजोरी तथा सो संग जोडिएका लक्षण देखिनु
कारण तथा जोखिमका अवस्थाहरु :
अधिकांश अवस्थाहरु मा क्षयरोग को प्रमुख कारक भनेको माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस (Mycobacterium tuberculosis) नै हो । तर अरु ब्याक्टेरियाहरु माइकोब्याक्टेरियम बोभिस (Mycobacterium bovis) र माइकोब्याक्टेरियम अफ्रिक्यानम (Mycobacterium africanum) पनि केही विशेष अवस्था मा जिम्मेवार भेटिएका छन् । तलका स्थितिहरु मा क्षयरोग ले थप जोखिम पैदा गर्ने सम्भावना रहन्छ–
उमेर : बच्चा र वृद्धहरु संक्रमण को जोखिम बढी हुन्छ ।
एचआईभी एड्स, क्यान्सर इत्यादि रोग द्वारा ग्रसित मानिसहरु मा रोग प्रतिरोध क्षमता शक्ति कम हुन गई यो रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
क्षयरोग को उच्च जोखिम मा रहेको मुलुक बाट पहिलो पुस्ताका रूप मा अन्यत्र आप्रवासी बन्नु
फोक्सो का क्षयरोगी सँग बढी सम्पर्क मा रहनु
खुला वातावरण को अभाव हुनु : जस्तो कि जेल (कारागार), सामूहिक आवासगृह
दुई हप्ता भन्दा बढी समयसम्म खोकी लागिरह्यो भने
खकारमा रगत देखियो भने
तौल घटाउन नखोज्दा पनि अचानक तौल घट्न थाल्यो भने
खोक्दा छाती दुख्न थाल्यो भने
हप्तादिन भन्दा लामो समयसम्म लगातार सामान्य ज्वरो आइरह्यो भने
क्षयरोग का जटिल अवस्थाहरु :
खोक्न खोज्दा मुख बाट रगत आउने
फोक्सो का कारण ले हुने हृदयरोग
विशेष प्रकारको माइकोब्याक्टेरियल संक्रमण
फोक्सो तथा प्लुरल क्याल्सिफिकेशन, जुन एक्स–रे मा देख्न सकिन्छ
ब्रोंकोप्लुरल फिस्टुला (फोक्सो मा प्वाल पर्नु)
उपचार का उपायहरु :
माथि उल्लेख गरिएका लक्षणहरु भएको विरामीमा रहेको सक्रिय क्षयरोग छातीको एक्स रे जाँच र खकार को सूक्ष्मदर्शक यन्त्र बाट परीक्षण गरेर सजीलै पत्ता लाग्दछ । यसलाई स्मीयर पोजिटिभ टीबी भनिन्छ र यो निकै सरुवा खालको हुन्छ । कहिलेकाहीं सूक्ष्मदर्शक यन्त्र मा सोझै देखिएन भने पनि ती जीवाणुहरु लाई कल्चर को माध्यम ले वृद्धि गरी पत्ता लगाउन सकिन्छ । यस्तोलाई कल्चर पोजिटिभ टीबी भनिन्छ । यदि क्षयरोग हुँदाहुँदै पनि ब्याक्टेरियाहरु (जीवाणुहरु) न त सूक्ष्मदर्शक यन्त्रमा न कल्चरमा दुवैमा देखिएन भने यसलाई कल्चर नेगेटिभ भनिन्छ र त्यो सरुवा हुँदैन ।
निष्क्रिय क्षयरोगलाई पीपीडी भनिने छालाको जाँचबाट वा क्वान्टिफेरन जाँच भनिने रगतको जाँचबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
निष्क्रिय र सक्रिय दुवै प्रकारका क्षयरोगको उपचार आवश्यक हुन्छ । निष्क्रिय क्षयरोगलाई छ महीनासम्म एकै प्रकारको औषधि खाएर निको पार्न सकिन्छ भने सक्रिय क्षयरोगलाई ३–४ थरीका औषधिहरु मिलाएर ६–९ महीनासम्म खाएर निको पार्न सकिन्छ । दिइएको पूरा मात्रा तोकिएको समयसम्म नियमित खाएपछि मात्रै क्षयरोग निको हुन्छ । कसैकसैमा औषधिलाई प्रतिरोध गर्ने क्षयरोगको विकास पनि हुन सक्दछ, जसलाई मल्टीड्रग रेजिष्टेन्ट टीबी (Multidrug Resistant TB) वा एक्सटेन्डेड रेजिष्टेन्ट टीबी (XDR TB) भनिन्छ । यस्तो क्षयरोगको उपचार गर्न निकै गाह्रो हुन्छ ।
क्षयरोग सम्बन्धी औषधिहरु नेपाल सरकारले डट्स DOTS (directly observed treatment short course) कार्यक्रम मार्फत निःशुल्क वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटल को संयुक्त रुपमा प्रयोग गरिन्छ । आवश्यक परेको खण्डमा स्ट्रेप्टोमाइसिन इन्जेक्शनको पनि उपयोग गर्न सकिन्छ ।
कुन कुन औषधिको संयुक्त प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विरामीको राम्ररी जाँच गरे पछि निश्चित गरिन्छ ।
उपचारको अवधि, योजना अनुरुप छोटो हुन्छ भनिए पनि, ६ देखि १२ महिनासम्म लम्बिन सक्छ र कहिलेकाहीं क्षयरोग को प्रकार र अवस्था हेरेर त्यो भन्दा पनि लामो हुन सक्छ ।
सक्रिय फोक्सो को क्षयरोग हो भन्ने जान्नासाथ उपचारको आरम्भ गरिहाल्नु पर्छ र अरुलाई नसरोस् भन्नका लागि मास्कको प्रयोग गर्नु पर्छ । औषधि सेवन गर्न थालेको दुई हप्ता पछि सर्ने सम्भावना कम हुँदै जान्छ ।
औषधिको सेवन गर्दा दिइएको संयोजनलाई सतकर्तापूर्वक पालना गर्नु पर्छ, अन्यथा क्षयरोगमा औषधि प्रतिरोधी गुणको विकास हुन गई उपचार गर्न कठिन हुन सक्छ । डट्सको रणनीति नै विरामीले औषधिको नियमित सेवन गरोस् भन्ने हुनाले यस उपचारमा परिवारको कुनै सदस्यलाई विरामीले औषधि खाए नखाएको हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ ।
नेपाल सरकारले क्षयरोगबाट बचाउन नवजात शिशुहरुलाई बीसीजीको खोप लगाउने गरेको छ ।
WHO ले आवश्यक पोषण मिल्ने गरी खानपान मिलाएमा क्षयरोग लाग्ने सम्भावना न्यून हुने बताउँछ । यदि शरीरको आवश्यक पोषण स्तर कायम रहन सक्यो भने रोग प्रतिरोधी क्षमता शक्तिको ह्रास हुँदैन ।
क्षयरोग / टीबीखोक्दा रगत आउनुघाँटी सुन्निनुज्वरोतौल घट्नुथकानपुरानो खोकीफोक्सोफोक्सो सम्बन्धीभोक नलाग्नुराती मा पसिना आउनुसंक्रामक रोग
निल्न गाह्रो हुनु (Dysphagia)
परिचय : ठोस [...]